I-Climate-smart cottage encinci
Västrakulla, Kalmar län, Sweden
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLennart
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uLennart iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Phakathi kweNybro kunye neKalmar yindlu yethu encinci. Isanda kulungiswa, inomgangatho olula kunye nendlu yangasese yangaphandle (Yahlukileyo) kunye nomthombo wayo wamanzi. Ekhitshini kukho isitovu sokhuni esivuthayo kunye nefriji. Ibarbecue isegadini nakwifenitshala yangaphandle apho uya kufumana neshawari yangaphandle.
I-cottage ixhotyiswe ngeeseli zelanga ezibonelela ngombane omncinci kodwa owaneleyo, umzekelo, iifriji kunye nokukhanyisa. Ayifanelekanga kwiintsapho ezinabantwana / abantu abakhubazekileyo ngenxa yendawo yokulala enezinyuko eziphakamileyo. Isidlo sakusasa siyafumaneka ngexabiso elongezelelweyo.
I-cottage ibekwe ecaleni kwendlela yelizwe elidala kunye netrafikhi encinci kakhulu. Indawo yabucala kunye nokwenzeka kokuhamba kwehlathi kunye nokukhwela ibhayisekile (iibhayisekile zinokubolekwa), okanye ujabulele uxolo kwaye uphumle kwi-hammock enencwadi elungileyo.
Ehlotyeni elomileyo, kwenzeka ukuba umthombo womile, ngoko sigcina amanzi kwiitoti esizigcwalisa ekhaya.
Nge-highway 25, unokufikelela ngokukhawuleza kwi-Glasriket kunye ne-Kalmar kunye nethuba lokuqubha e-Kalmarsund okanye uhlolisise i-Sun kunye ne-Winds Island-Öland.
Ikhaya lethu likumgama ozimitha ezingama-300 kwaye siyafumaneka ukuba kukho naziphi na izinto ezingaqondakaliyo. Kwakhona sinokunikela iingcebiso malunga noko kwenziwa kwindawo yasekuhlaleni.